विदेशबाट फर्किएकाहरुको सीप र श्रमको उपयोग गछौं : अध्यक्ष गुरुङ — नयाँ कुरा
२०७७ असार ३ , बुधबार
लमजुङका आठ स्थानीय तह मध्ये मर्स्याङ्दी गाउँपालिका एक हो । यो गाउँपालिका साविकका ७ वटा गा.वि.स (घनपोखरा, खुदी, ताघ्रिङ, घेर्मु, बाहुनडाँडा, भुलभुले, सिम्पानी) मिलेर बनेको हो । यसको क्षेत्रफल ५९७.२५ वर्ग कि.मि. छ । यसको पूर्वी सिमाना दोर्दी गाउँपालिका, पश्चिमः क्व्होलासोथार गाउँपालिका, दक्षिणः बेसिशहर नगरपालिका छ भने उत्तरी सिमानामा मनाङ जिल्लाको नासोङ गाउँपालिका रहेको छ । जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, जडिबुडीखेतीको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस पालिकाको जनसंख्या करिब १८७५९ जना रहेको छ जसमा ४४०९ घरधुरी छन् ।
यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण विश्व नै प्रभावित भएको छ । देशभर संक्रमण बढीरहँदा लमजुङ भने सुरक्षित रहेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका विच मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ भन्ने विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङसँग गरिएको कुराकानी :
कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी गाउँपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ ?
कोभिड–१९ सुरु भएपछि ५० लाखको कोष स्थापना गर्यौ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उकास्न २० लाखको जीवन विमा गयौं, उहाँहरुले खाइपाई आएको सेवासुविधामा २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने ब्यवस्था गयौं । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विपन्न परिवार गरी १२ सय १९ परिवारलाई राहत बाड्यौं । क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर बाहिरबाट आएकाहरुलाई राख्ने काम गयौं ।
विदेशमा रहेका पालिका भित्रका नागरिकहरुलाई कसरी उद्धार गरियो ?
भारतमा रहेका पालिकामा नागरिकहरुलाई विभिन्न स्थानमा समन्वय गरेर ल्याउने काम गयौं । डुम्रेसम्म पुगेर एम्बुलेन्समा ल्यायौं । भारतबाट आउने पालिकाका नागरिकलाई जनही ५ हजार रुपियाँ गाडीभाडा पठाएर आवतजावत सहज बनायौं । आएपछि जिल्लास्थित क्वारेन्टिनमा राखेर पिसिआर जाँच गरेपछि गाउँमा ल्याएका छौं ।
गाउँपालिकाको दैनिक कामकाज कसरी अघि बढाइयो ?
लगडाउनको केही समय काम गर्न सकिएन । विस्तारै समाजमा सचेतना जगाउँदै, समाजिक दुरी र स्वास्थ्य सकर्तकता अपनाएर विस्तारै कार्यालय सुचारु गयौं । सबै कर्मचारीहरुलाई बोलायौं । अहिले सबै शाखाहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । कामहरु भैरहेको छ ।
योजनाका कामहरु के भैरहेका छन ?
केही समय योजनाका काम रोकिएपनि बैशाख ७ गते बैठक गरी योजनाका कामहरु खुलायौं । यसले स्थानीयलाई रोजगारी दियो । धमाधम कामहरु भए । अहिले ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम सकिएको छ ।
विदेशबाट आएकाहरुलाई कसरी ब्यवस्थान गर्ने सोंच छ ?
विदेशबाट आएकाहरुलाई रोजगारीमा जोड्ने हामीसँग चुनौती छ । त्यसैले हामीले श्रममा आधारित राहत कार्यक्रम ल्याएका छौं । उहाँहरुलाई विकास निर्माणका काममा जोड्ने र सहज तरिकाले ज्याला भुक्तानी गरेर जीवनयापन सहज बनाउने तयारीमा छौं । विदेशमा सिकेर आएका विभिन्न सीपलाई प्रयोग गरेर उद्यमी बनाउनका लागि युवा उद्यम स्वरोजगार कोष स्थापना गरेका छौं ।
आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम कस्तो बनाउने तयारी छ ?
कोभिड–१९ संक्रमणले पारेको प्रभावका कारण आगामी बजेट स्वास्थ्य र कृषिमा लक्षित हुनेछ । यसबाहेक नियमित विकास निर्माण, शिक्षा, पर्यटन आदिमा पनि रहने छ । कृषिमा ब्यवसायिकरण गराउने गरि कार्यक्रमहरु ल्याउँदैछौं ।